I-129th Canton Fair
I-129th Online Canton Fair emayelana nemihlobiso yasekhaya yavulwa ngo-Ephreli 15, Isikhathi saseBeijing. Kulo mbukiso, sethule imikhiqizo eminingi emisha ngaphandle kwamakhandlela anephunga elimnandi nezitsha zamakhandlela ezingilazi, okuhlanganisa amakhandlela engcina yezinyosi, amakhandlela ezinsika namakhandlela obuciko. Futhi kuze kube manje, lo mbukiso ...
Ngemva kwesikhathi eside sokuthuthukiswa embonini yamakhandlela, thina Winby ikhandlela liye laqongelela amakhasimende amaningi futhi sathola udumo oluphezulu oluvela emazweni amaningi. Okulandelayo ukubonwa kwamanye amakhasimende kwemikhiqizo namasevisi ethu. ▶ kuhle kakhulu, futhi ngivivinye ikhandlela lami...
Sibambe umhlangano wethu waminyaka yonke ngesonto eledlule, kwakuyisikhathi esijabulisayo, sonke esingasikhumbula. Ibhodi elingemuva eliklanywe ngokukhethekile lomhlangano waminyaka yonke. Wonke umuntu uvunule futhi uhamba egqoke izingubo zabo ezinhle kakhulu. Awukho umuzwa wokushesha mayelana ne-s enkulu ...
Inkampani ye-Winby candle yinkampani echwepheshile ukukhiqiza amakhandlela anephunga elimnandi, izimbiza zekhandlela, insika yekhandlela kanye nekhandlela lobuciko. Sibambe iqhaza ku-Canton Fair iminyaka eminingi, futhi saheha amakhasimende amaningi kakhulu avela emazweni amaningi emhlabeni jikelele. Kuze kube manje, sisahamba phambili...